Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance U-Kevin Gameiro Ubuntwana Bombhalo Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-Finished Finisher eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Kev". I-Kevin Gameiro Ingane Yethu Yokubantwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi angaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe okuphelisa emtholampilo kodwa abambalwa bacabanga nge-Bio yethu ye-Kevin Gameiro ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
I-Kevin Gameiro Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Imininingwane -Isiqalo sokuphila
UKevin Gameiro wazalwa ngosuku lwe-9th lukaMeyi 1987 eSenlis, idolobha lase-Oise, 35 amakhilomitha (22 mi) enyakatho yeParis France. Wazalelwa uMnumzane noMnuz Dominique Gameiro abazali bakhe.
Abazali bakhe basuka ePortugal. Uqale umsebenzi wakhe wezemidlalo edlala e-ES Marly-la-Ville engekude nomuzi wakhe waseFrance eneminyaka eyisithupha. Ngaphambi kokuguqula i-13 njengoba icatshangelwe ngezansi, wakhetha ukuhlala esifundeni ngokushintsha amaqembu ahlukene asemasha. Njengomuntu oneminyaka engu-13 ubudala, uKevin wayesevele ephila, edla futhi elele ibhola.
Ngesikhathi ehle kakhulu esemncane, i-Gameiro ibonwe ngumdlali wangaphambili weRC Strasbourg kanye nomsakazo Jacky Duguépéroux ngubani ophakamise umdlali ukuthi ajoyine iqembu lakhe langaphambili. Ku-2004, i-Gameiro yaqeda ukuthuthela eklabhu yase-Alsatian ejoyina njengomdlali osemusha. Yilapho ukuvuthwa, njengokufanekiselwa ngezansi, kungena. Ngaphezu kwalokho, wafunda ikhono lakhe lokuqeda ukwelashwa kule club.
Ngemuva kwe-stint ephumelelayo eLorient kusuka ku-2008 kuya ku-2011, uKevin waziwa njengomdlali we-class class. NgoJuni 10, 2011, uKevin wavuma ngegama elikhulunywe yiParis Saint-Germain futhi wasayina isivumelwano seminyaka emine ngentengo ye-11 million euro kanye nokukhethwa kwamabhonasi. Izinsuku zakhe enkampanini zibalwa ngemuva kokuqashwa kwe-2011 ngabanikazi baseQatar.
Ngemuva kokubona imincintiswano evela ngo-Okthoba 25, i-2013, uKevin wafinyelela isivumelwano neqembu laseSpain iSvilla FC futhi wasayina inkontileka yeminyaka emihlanu ebiza i-10 million euros. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Kevin Gameiro Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Imininingwane -Ukuphila Ubudlelwano
Love at kuqala ukubona kuphela kwenzeka ku-11% wamacala futhi kuvame kakhulu emadodeni kunabesifazane. UKevin wathandana noLina ekuqaleni kokubona.
Bobabili babe namadodana amabili u-Aroni no-Ayden. UKevin weddings Lina ngemuva kokubeletha izingane zabo ezimbili. Kwakuwumshado oyimfihlo owawuthandwa kakhulu amalungu omndeni wakubo.
UKevin Gameiro nendodana yakhe yokuqala, u-Aaron basondelene kakhulu. U-Aaron Gameiro uthemba ukulandela izinyathelo zikayise ukuba abe ngumdlali webhola lezinyawo.
I-Kevin Gameiro Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Imininingwane -Ukuphila Personal
UKevin Gameiro unesici esilandelayo ebuntwini bakhe.
Amandla: U-Kevin unokwethenjelwa emisebenzini yakhe nasebudlelwaneni. Ubuye abe nesineke, esebenzayo, ozinikele futhi ekugcineni, ophethe kahle.
Ukubuthakathaka: UKevin wayenenkani, enenzuzo futhi engahambisani.
Yini uKevin Gameiro ayithandayo: Uthanda ukufihla ubuntu bakhe emphakathini, uthanda ukulima, ukupheka, umculo nokuthandana.
Lokho uKevin akuthandi: Izinguquko ezingenangqondo ezithinta indlela yokuphila ngabantu abathandayo, ubudlelwane kanye nezinkinga zomsebenzi nokuphepha kwanoma yiluphi uhlobo.
Ngokufingqa, uKevin uyasebenza kakhulu futhi uhlelekile kahle. Ungumuntu othanda ukuvuna njalo izithelo zomsebenzi wakhe.
I-Kevin Gameiro Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Imininingwane -Ukukhethwa Kwezimoto
U-Kevin Gameiro ungumdlali onamandla we-Audi R8 okubiza nge-135,000 Euros. Uyibheka njengendlela a "Umjaho oyingqayizivele wemoto".
I-Kevin Gameiro Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Imininingwane -Family
UKevin Gameiro uvela emlandweni womndeni ophakathi komphakathi ngaphambi kokuba ibhola likhokhwe. Unomlando wasePutukezi ngoyise kayise. Uvela emndenini onemikhuba yezimele ezilula.
Ukufuduka kwesiPutukezi kumzukulu kaKevin Gameiro kwenzeka ikakhulukazi ngesikhathi se-1960 no-1970s, ukubalekela ukucindezela nokubhalisa, nokuthola isimo esingcono sokuphila. Iningi laqala ukusebenza ekwakhiweni.
I-Kevin Gameiro Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Imininingwane -IPortugal echithekile
I-Gameiro yayifanele ukumela iPortugal ezingeni eliphakeme lamazwe ngamazwe. Ku-2009, umphathi-ke uCarlos Queiroz wathi i-Gameiro yile "Umdlali othakazelisayo" nokuthi yena "Angathanda ukukhuluma naye" mayelana nokumelela iPortugal. Noma kunjalo, i-Gameiro yanciphisa inkulumo, ithi "Wayengenalo ngempela izixhumanisi ezweni" nokuthi wakhetha ukumela uFrance.
I-Kevin Gameiro Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Imininingwane -Kungani ekhetha i-Athletico Madrid
Ngamazwi akhe ..."I-Atletico Madrid inikezela ngokubambisana kakhulu. Futhi, ngezikhathi eziningi, ithimba ligcine idumela layo. Ngaphambi kokuba ngize, ngatshelwa ukuthi kufana nomndeni omkhulu. Kwakukhona ithuba lokujoyina iBelcon, kodwa engqondweni yami, kucacile ukuthi ngifuna ukujoyina i-Atletico ngesikhathi u-Atletico engithintana naye. Ngiyaziqhenya ngangijoyina ngoba njengoba ngizizwa ngixhumeke kakhulu kubalandeli babo "
I-Gameiro iphinde ikhombise ukuthi ingathola imali eyengeziwe ngokushiya iSpain, kodwa yayingekho inhloso yokwenza kanjalo.
Waqhubeka: "Amanxusa ami angenza ngaqaphela ukuthi kunezinhlinzeko ezikhangayo ezingeni lezezimali kodwa ngangifuna ukuhlala eSpain. Ngizizwa kahle kakhulu lapha. Umndeni wami nawo futhi uLa Liga ungenye yezinkulumo ezinhle kakhulu.
I-Kevin Gameiro Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Imininingwane -Ukuguquka komsindo
U-Kevin Gameiro ungumuntu ongathandi ukushintshwa ikakhulu uma edlala kahle emdlalweni. Ku-2017, uKevin uvume intukuthelo yakhe emhlanganweni we-UCL ngemuva kokufakwa esikhundleni somzuzu we-71st ohlangothini lwakhe lwe-4-2 Champions League phezu kukaBayer Leverkusen.
Umdlali waseFrance, owasekela umgomo wokuqala Antoine Griezmann ngaphambi kokukhipha isigwebo se-58th ngomzuzu, utshele uMarca ngemuva komdlalo: "Yebo, ngangithukuthele ngoba ufuna ukudlala wonke umdlalo uma udlala kahle. Ngangithukuthele kancane, kodwa into ebaluleke kakhulu ukunqoba kweqembu. Lona ibhola, lapho umqeqeshi [Diego Simeone] unquma futhi yilokho ".
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Kevin Gameiro Childhood Indaba yethu kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.